Na-atụkwasị Jehova Nchegbu Gị Niile—1 Pita 5:7
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Czech Sign Language Dangme Danish Digor Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Finnish Sign Language Fon French French Sign Language Ga Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gujarati Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Hungarian Sign Language Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mexican Sign Language Mingrelian Mixe Mongolian Moore Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese Sign Language Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
‘Na-atụkwasịnụ Jehova nchegbu unu niile, n’ihi na ihe banyere unu na-emetụ ya n’obi.’—1 PITA 5:7.
ABỤ: 60, 23
Olee otú Okwu Chineke nwere ike isi mee ka anyị ghara ịna-echegbu onwe anyị?
Olee otú i nwere ike isi nweta “udo nke Chineke”?
Olee otú ọgbakọ nwere ike isi nyere gị aka ka ị ghara ịna-echegbu onwe gị?
1, 2. (a) Gịnị mere na o kwesịghị iju anyị anya na anyị na-echegbu onwe anyị mgbe ụfọdụ? (Lee ihe e sere ná mmalite isiokwu a.) (b) Gịnị ka anyị ga-eleba anya na ya n’isiokwu a?
ANYỊ bi n’oge siri ike. Ezigbo iwe ji Setan bụ́ Ekwensu. Ọ “na-ejegharị dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ, na-achọ onye ọ ga-eripịa.” (1 Pita 5:8; Mkpu. 12:17) N’ihi ya, ọ naghị eju anyị anya na anyịnwa na-efe Chineke na-echegbu onwe anyị mgbe ụfọdụ. A sị ka e kwuwe, ndị fere Chineke n’oge gara aga chegburu onwe ha mgbe ụfọdụ. Dị ka ihe atụ, Baịbụl kwuru na ‘mkpụrụ obi Eze Devid na-agba mgba,’ ya bụ, na ọ na-echegbu onwe ya. (Ọma 13:2) Chetakwa na Pọl onyeozi nọ na-enwe “nchegbu maka ọgbakọ niile.” (2 Kọr. 11:28) Ma, gịnị ka anyị nwere ike ime ma ọ bụrụ na anyị na-echegbukarị onwe anyị?
2 Nna anyị nke eluigwe, onye hụrụ anyị n’anya, nyeere ndị ohu ya aka n’oge gara aga. Ọ na-enyekwara anyị aka ka anyị ghara ịna-echegbu onwe anyị ma nsogbu bịara anyị. Baịbụl gwara anyị, sị: “Na-atụkwasịnụ ya nchegbu unu niile, n’ihi na ihe banyere unu na-emetụ ya n’obi.” (1 Pita 5:7) Ma, olee otú ị ga-esi eme ya? Ka anyị leba anya n’ihe anọ ga-enyere gị aka. Ha bụ: Iji obi gị niile na-ekpe ekpere, ịgụ Okwu Chineke ma na-echebara ihe ị na-agụ echiche, ikwe ka mmụọ nsọ Jehova nyere gị aka, na ịkọrọ onye ị tụkwasịrị obi ihe na-echegbu gị. Ka anyị na-atụle ihe anọ a, lee ma ị̀ ga-achọpụta ihe ndị i kwesịrị ime ga-abara gị uru.
3. Olee otú ị ga-esi “tụkwasị Jehova ibu arọ gị” n’ekpere?
3 Ihe mbụ anyị ga-eme bụ iji obi anyị niile kọọrọ Jehova nsogbu anyị n’ekpere. Ọ bụrụ na e nwere ihe na-eme ka obi ghara iru gị ala, egwu ana-atụ gị, ma ọ bụ gị ana-echegbu onwe gị, gwa Nna gị nke eluigwe, bụ́ onye hụrụ gị n’anya, otú ọ dị gị n’obi. Devid rịọrọ Jehova, sị: “Chineke, biko, ṅaa ntị n’ekpere m.” O kwukwara, sị: “Tụkwasị Jehova ibu arọ gị, ya onwe ya ga-akwadokwa gị.” (Ọma 55:1, 22) Mgbe i mechara ihe niile i nwere ike ime iji dozie nsogbu gị, ekpere i ji obi gị niile kpee ga-abara gị uru karịa ichegbuwe onwe gị. Ma, olee otú ekpere ga-esi enyere gị aka ka ị ghara ịna-echegbu onwe gị?—Ọma 94:18, 19.
4. Gịnị mere anyị ji kwesị ikpe ekpere ma e nwee ihe na-echegbu anyị?
4 Gụọ Ndị Filipaị 4:6, 7. Jehova nwere ike ịza ekpere anyị ji obi anyị niile na-ekpe mgbe niile. Olee otú o nwere ike isi mee ya? O nwere ike ime ka ahụ́ ruo anyị ala, ka anyị kwụsị ịna-echegbu onwe anyị. Ọtụtụ ndị esila n’ihe Chineke meere ha chọpụta na ihe a bụ eziokwu. Mgbe e nwere ihe na-echegbu ha, Chineke nyeere ha aka ka obi ruo ha ala otú mmadụ na-agaghị aghọtali. Chineke nwekwara ike imere gị ụdị ihe ahụ. N’ihi ya, “udo nke Chineke” nwere ike inyere gị aka imeri nsogbu ọ bụla bịaara gị. I nwere ike ịtụkwasị nkwa Jehova ji obiọma ya kwe gị obi. Ọ sịrị: “Elegharịla anya n’ụjọ, n’ihi na abụ m Chineke gị. M ga-eme ka ị dị ike. M ga-enyere gị aka.”—Aịza. 41:10.
OTÚ OKWU CHINEKE SI EME KA OBI RUO ANYỊ ALA
5. Olee otú Okwu Chineke ga-esi mee ka obi ruo gị ala?
5 Ihe nke abụọ ga-eme ka obi ruo gị ala bụ ịgụ Baịbụl na ịtụgharị uche na ya. Gịnị mere o ji dị mkpa? Baịbụl kwuru ihe ga-enyere gị aka ka ị ghara ịna-echegbu onwe gị, na ihe nwere ike ime ka ị kwụsịlata ichegbu onwe gị ma ọ bụkwanụ kwụsịchaa ya kpamkpam. Echefukwala na ihe mere Baịbụl ji baa uru bụ na ihe e dere na ya bụ okwu Onye kere anyị nakwa amamihe ya. Ka ị na-atụgharị uche n’Okwu Chineke kwa ụbọchị ma na-eche otú kacha mma ị ga-esi na-eme ihe o kwuru, ọ ga-eme ka okwukwe gị sie ezigbo ike. Jehova kwuru na ịgụ Okwu ya ga-eme ka mmadụ ‘nwee obi ike ma dị ike,’ kama ‘ịma jijiji ma tụwa ụjọ.’—Jọsh. 1:7-9.
6. Olee uru ihe Jizọs kwuru ga-abara gị?
6 N’Okwu Chineke, anyị ga-ahụ ihe Jizọs kwuru kasiri ndị mmadụ obi. Ihe o kwuru na ihe ndị ọ kụziri mere ka obi ruo ndị nụrụ ya ala. Ọ na-atọ ìgwè mmadụ ụtọ ịnụ okwu ya n’ihi na ọ na-eme ka obi ruo ndị na-echegbu onwe ha ala, na-eme ka okwukwe ndị na-adịghị ike sie ike, kasiekwa ndị dara mbà obi. (Gụọ Matiu 11:28-30.) Ihe o mere gosiri na ihe banyere ndị ọzọ na-emetụ ya n’obi. Ọ kụziiri ha Okwu Chineke, gbooro ha mkpa ha, meekwa ka obi dị ha ụtọ. (Mak 6:30-32) Jizọs ga na-enyere anyị aka taa otú ahụ o kwere nkwa ịna-enyere ndịozi ya só ya na-agagharị aka. Ọ pụtaghị na anyị ga-anọrịrị n’ebe Jizọs nọ tupu ya enyere anyị aka. Ebe ọ bụ Eze anyị n’eluigwe, ọ ka na-enwere anyị ọmịiko. N’ihi ya, i chegbuwe onwe gị, ọ ga-emere gị ebere ma ‘gbatara gị ọsọ enyemaka n’oge kwesịrị ekwesị.’ O doro anya na Jizọs ga-enyere gị aka ka ị ghara ịna-echegbu onwe gị. O nwekwara ike ime ka i nwee olileanya na obi ike.—Hib. 2:17, 18; 4:16.
ÀGWÀ ỌMA NDỊ MMỤỌ NSỌ GA-EME KA ANYỊ NA-AKPA
7. Olee uru ị ga-erite ma Chineke nye gị mmụọ nsọ otú ị rịọrọ ya?
7 Jizọs kwere anyị nkwa na Nna anyị nke eluigwe ga-enye anyị mmụọ nsọ ma anyị rịọ ya. (Luk 11:10-13) Ị ga-esi otú ahụ nweta ihe nke atọ ga-enyere gị aka ka ị ghara ịna-echegbu onwe gị, ya bụ, mkpụrụ nke mmụọ nsọ. Àgwà ndị a magburu onwe ha mmụọ nsọ na-enyere anyị aka ịna-akpa na-egosi àgwà e ji mara Chineke pụrụ ime ihe niile. (Gụọ Ndị Galeshia 5:22, 23; Kọl. 3:10) Ka ị na-amụta àgwà ndị so ná mkpụrụ nke mmụọ nsọ, gị na ndị ọzọ ga na-adịkwu ná mma. Ị ga-esi otú ahụ gbaara ọtụtụ ihe ndị nwere ike ime ka mmadụ na-echegbu onwe ya ọsọ. Ka anyị leba anya n’otú mkpụrụ nke mmụọ nsọ ga-esi enyere gị aka.
8-12. Olee otú àgwà ndị so ná mkpụrụ nke mmụọ nsọ ga-esi nyere gị aka ka ị ghara ịna-echegbu onwe gị?
8 “Ịhụnanya, ọṅụ, udo.” Ọ bụrụ na ị na-agbalị ịna-akwanyere ndị mmadụ ùgwù, o nwere ike ime ka ị mara ihe i kwesịrị ime ma iwe wewe gị. N’ihi gịnị? Ka ị na-egosi ụmụnna gị na ị hụrụ ha n’anya, na-enwere ha ọmịiko, na-asọpụrụ ha, ị gaghị na-eme ihe nwere ike ime ka ị na-echegbu onwe gị.—Rom 12:10.
9 “Ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma.” Baịbụl sịrị: “Nweenụ obiọma n’ebe ibe unu nọ, na-enwekwanụ obi ọmịiko, na-agbagharanụ ibe unu kpamkpam.” (Efe. 4:32) Anyị na ndị mmadụ ga na-adị ná mma ma ọ bụrụ na anyị na-eme ihe a Baịbụl kwuru. Anyị agaghị eme ihe nwere ike ime ka anyị na-echegbu onwe anyị. E nwee nsogbu ndị ezughị okè kpatara, anyị ga-ama otú anyị ga-esi dozie ya.
10 “Okwukwe.” Ọtụtụ mgbe, ihe na-eme ka anyị na-echegbu onwe anyị bụ ihe gbasara ego na ihe onwunwe. (Ilu 18:11) N’ihi ya, okwukwe gị sie ike na Jehova ga na-elekọta gị, o nwere ike ime ka ị ghara ịna-echegbu onwe gị. Olee otú ọ ga-esi eme ya? Pọl gwara anyị ka ihe ndị anyị nwere ugbu a ju anyị afọ. I mee ihe a o kwuru, i nwere ike ị gaghị na-echegbu onwe gị. Pọl kwukwara, sị: “N’ihi na [Chineke ekwuwo], sị: ‘M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị ma ọlị.’ Ka anyị nwee obi ike wee sị: ‘Jehova bụ onye na-enyere m aka; agaghị m atụ egwu. Gịnị ka mmadụ pụrụ ime m?’”—Hib. 13:5, 6.
11 “Ịdị nwayọọ, njide onwe onye.” Chegodị uru ọ ga-abara gị ma ị na-akpa àgwà ndị a. O nwere ike ime ka ị ghara ime ihe ndị ga-eme ka ị na-echegbu onwe gị. Ọ ga-abakwara gị uru ma i wepụ ‘obi ilu na iwe na ọnụma na iti mkpu na okwu mkparị’ n’obi gị.—Efe. 4:31.
12 O doro anya na ị ga-adị umeala n’obi ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịtụkwasị obi ‘n’aka dị ike nke Chineke’ na ‘ịtụkwasị Chineke nchegbu gị niile.’ (1 Pita 5:6, 7) Ma, ịdị umeala n’obi ga-eme ka ị na-eme ihe ga-eme ka gị na Chineke na-adị ná mma, ya ana-akwadokwa gị. (Maị. 6:8) Ọ bụrụ na ị ghọta na e nwere ihe ndị ị ga-emeli na ihe ndị ị na-agaghị emeli, o nwere ike ime ka ị ghara ịna-echegbu onwe gị, n’ihi na ị ga-atụkwasị Chineke obi.
“UNU ECHEGBULA ONWE UNU”
13. Gịnị ka Jizọs bu n’obi mgbe ọ sịrị: “Unu echegbula onwe unu”?
13 Na Matiu 6:34 (gụọ ya), Jizọs nyere anyị ndụmọdụ bara uru, sị: “Unu echegbula onwe unu.” O nwere ike ịdị ka ime ihe a Jizọs kwuru ò siri ike. Gịnị ka ihe a o kwuru pụtara? O doro anya na ihe ọ na-ekwu abụghị na e nweghị mgbe onye na-efe Chineke ga-echegbu onwe ya. Anyị ebula ụzọ mụta na Devid na Pọl chegburu onwe ha mgbe ụfọdụ. Ma, Jizọs ji ihe ahụ o kwuru na-akụziri ndị na-eso ụzọ ya na nchegbu na-enweghị isi ma ọ bụ oké nchekasị anaghị eme ka nsogbu mmadụ nwere kwụsị. Ụbọchị nke ọ bụla na-enwe nsogbu nke ya. N’ihi ya, Ndị Kraịst ekwesịghị ibu nchegbu nke ụbọchị gara aga ma ọ bụ nke echi bukwasị na nke taa. Olee otú ị ga-esi mee ihe a Jizọs kwuru ma kwụsị ịna-echegbu onwe gị?
Ihe Ụfọdụ I Nwere Ike Ime Ka Ị Ghara Ịna-echegbu Onwe Gị
Buru ụzọ na-eme ihe ndị ka mkpa.
NDỊ FILIPAỊ 1:10, 11
Na-atụ anya ihe ndị ị ga-emeli.
Na-ewepụta oge naanị gị ga-anọ kwa ụbọchị.
Na-echebara ihe Jehova kere echiche.
ABỤ ỌMA 104:24, 25
Na-ehi ụra nke ọma.
14. Gịnị ka ị ga-eme ka ị ghara ịna-echegbu onwe gị banyere ihe ndị i mejọrọ n’oge gara aga?
14 Mgbe ụfọdụ, ndị mmadụ na-echegbu onwe ha maka ihe ndị ha mejọrọ n’oge gara aga. Obi nwere ike ịna-ama ha ikpe maka ihe ha mere n’oge gara aga. O nwedịrị ike ịbụ ọtụtụ afọ gara aga. Eze Devid chegburu onwe ya mgbe ụfọdụ banyere ihe ndị o mejọrọ. O kwuru, sị: “Ebigbọwo m n’ihi ịsụ ude nke obi m.” (Ọma 38:3, 4, 8, 18) Gịnị ka Devid kwesịrị ime mgbe ahụ? Gịnị ka o mere? Ọ tụkwasịrị Jehova obi na ọ ga-emere ya ebere ma gbaghara ya. O ji obi ike kwuo, sị: “Obi ụtọ na-adịrị onye a gbaghaara nnupụisi ya.”—Gụọ Abụ Ọma 32:1-3, 5.
15. (a) Gịnị mere na i kwesịghị ịna-echegbu onwe gị maka ihe ndị na-eme ugbu a? (b) Olee ihe ndị i nwere ike ime ka ị ghara ịna-echegbu onwe gị? (Kwuo ihe dị́ n’igbe bụ́ “ Ihe Ụfọdụ I Nwere Ike Ime Ka Ị Ghara Ịna-echegbu Onwe Gị.”)
15 I nwekwara ike ịna-echegbu onwe gị n’ihi ihe ndị na-eme ugbu a. Dị ka ihe atụ, mgbe Devid na-ede Abụ Ọma nke iri ise na ise, ụjọ nọ na-atụ ya na ọ ga-anwụ. (Ọma 55:2-5) Ma, o kweghị ka nchegbu mee ka ọ kwụsị ịtụkwasị Jehova obi. O kpesiri ekpere ike rịọ Jehova ka o nyere ya aka ná nsogbu ya. Ma, ọ ghọtakwara na ya kwesịrị ime ihe gbasara nsogbu ya. (2 Sam. 15:30-34) Ihe i kwesịrị ịmụta n’ihe a Devid mere bụ na kama ịna-echegbu onwe gị maka nsogbu bịaara gị, mee ihe i nwere ike ime iji dozie ya, tụkwasịkwa Jehova obi na ọ ga-enyere gị aka.
16. Olee otú ihe aha Chineke pụtara ga-esi mee ka okwukwe gị sie ike?
16 Onye Kraịst nwere ike ịna-echegbu onwe ya mgbe ụfọdụ maka ihe nwere ike ime n’ọdịnihu. Ma, i kwesịghị ikwe ka ihe ị na-amaghị ma ọ̀ ga-eme chuwe gị ụra. N’ihi gịnị? Ọ bụ n’ihi na ọtụtụ mgbe, ihe nwere ike mee, ma ọ gaghị adị njọ otú anyị tụrụ ụjọ ya. Ihe ọzọ bụ na e nweghị ihe karịrị Chineke, bụ́ onye anyị na-akọrọ ihe niile na-echegbu anyị. Otu n’ime ihe aha ya pụtara bụ “M Ga-abụ Ihe M Chọrọ Ịbụ.” (Ọpụ. 3:14) Ihe aha ya pụtara na-eme ka obi sie anyị ike na ọ ga-emeli ka ihe o bu n’obi maka ndị ohu ya mezuo. Obi kwesịrị isi gị ike na Chineke ga-akwụ ndị tụkwasịrị ya obi ụgwọ ma nyere ha aka ka ha ghara ịna-echegbu onwe ha banyere ihe gara aga, ihe na-eme ugbu a, na ihe ga-eme n’ọdịnihu.
KỌỌRỌ YA ONYE Ị TỤKWASỊRỊ OBI
17, 18. Olee otú ịkọrọ onye ọzọ nsogbu gị ga-esi nyere gị aka ka ị ghara ịna-echegbu onwe gị?
17 Ihe nke anọ ga-enyere gị aka ma e nwee ihe na-echegbu gị bụ ịkọrọ onye ị tụkwasịrị obi otú obi dị gị. Di gị ma ọ bụ nwunye gị, enyi gị ma ọ bụ okenye ọgbakọ nwere ike inyere gị aka ka i lewe nsogbu ahụ anya otú kwesịrị ekwesị. Baịbụl sịrị: “Ọ bụ nchegbu nke dị n’obi mmadụ ga-anyịgbu ya, ma, ọ bụ okwu ọma na-eme ka ọ ṅụrịa ọṅụ.” (Ilu 12:25) Ịkọrọ onye ọzọ nsogbu gị n’ezoghị ọnụ nwere ike inyere gị aka ịghọta ihe na-echegbu gị ma mee ihe i kwesịrị ime. Baịbụl kwukwara, sị: “Atụmatụ na-aghasasị ma ọ bụrụ na a gbaghị izu, ma a na-arụzu ihe ma e nwee ọtụtụ ndị ndụmọdụ.”—Ilu 15:22.
18 Jehova na-ejikwa ọmụmụ ihe ọgbakọ enyere Ndị Kraịst aka idi ihe na-echegbu ha. Ị gaa ọmụmụ ihe, gị na ụmụnna gị ga-anọrị. Ihe gbasara gị na-emetụ ha n’obi. Ha chọkwara ịna-agbarịta ibe ha ume. (Hib. 10:24, 25) Otú gị na ha si ‘agbarịta ibe unu ume’ ga-enyere gị aka ka okwukwe gị sie ike, meekwa ka ọ dịrị gị mfe ịkwụsị ịna-echegbu onwe gị.—Rom 1:12.
IHE GA-AKACHA EME KA Ị DỊ IKE BỤ ADỊM NÁ MMA GỊ NA CHINEKE
19. Gịnị mere obi ji kwesị isi gị ike na adịm ná mma gị na Jehova ga-eme ka ị dị ike?
19 Chegodị otú otu okenye bí na Kanada si mata na ịkọrọ Jehova ihe na-echegbu ya bara ezigbo uru. Ọ bụ onye nkụzi. Ọrụ ahụ na-ewepụ ya ihe n’ahụ́. Ọ na-arịakwa otu ọrịa na-eme ka ọ na-echegbu onwe ya. Olee otú nwanna a si die nsogbu ahụ? Ọ sịrị: “Achọpụtara m na ihe kacha mee ka m die nsogbu ndị bịaara m bụ ịgbasi mbọ ike ka mụ na Jehova dịkwuo ná mma. Ezigbo ndị enyi m n’ọgbakọ na ụmụnna ndị ọzọ na-enyere m aka ma nsogbu bịara m. M na-akọrọ nwunye m hoo haa otú obi dị m. Ndị okenye na onye nlekọta sekit anyị nyekwaara m aka ile nsogbu m anya otú Chineke si ele ya. M gakwara ụlọ ọgwụ, gbanwee ihe ụfọdụ m na-eji oge m eme, wepụtakwa oge m ga-eji na-ezu ike ma na-emega ahụ́. Eji m nwayọọ nwayọọ na-edi nsogbu m. E nwee nke m na-amaghị ihe m ga-eme banyere ya, m na-ahapụrụ ya Jehova.”
20. (a) Olee otú anyị ga-esi ‘tụkwasị Jehova nchegbu anyị’? (b) Gịnị ka anyị ga-eleba anya na ya n’isiokwu na-esonụ?
20 N’isiokwu a, anyị amụtala na anyị kwesịrị ịna-ekpe ekpere kọọrọ Jehova ihe na-echegbu anyị, na-agụ Okwu ya ma na-atụgharị uche na ya. Anyị ahụla na ọ bara uru ịna-akpa àgwà ndị so ná mkpụrụ nke mmụọ nsọ, ịna-akọrọ enyi anyị tụkwasịrị obi otú ọ dị anyị n’obi, na ịna-aga ọmụmụ ihe Ndị Kraịst. N’isiokwu na-esonụ, anyị ga-eleba anya n’otú ọzọ Jehova si eme ka anyị dị ike, nke bụ́ ime ka anyị nwee olileanya na ọ ga-akwụ anyị ụgwọ.—Hib. 11:6.